मार्केटिंग टेकब्लॉग.कमा डोमेन परिवर्तन भयो Martech Zone
सोमवार, जुलाई 7, 2008 सोमबार, नोभेम्बर 4, 2013 Douglas Karr
यो हुन सक्छ googlecide… वा Blogocide, हामी विचार गर्ने छौँ। मैले हिजो लेखे कि म मेरो नाम मेरो डोमेन नामको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन.
जे भए पनि, तपाईले आजबाटै सुरूवात गर्नुभयो जुन मैले आधिकारिक रूपमा dknewmedia.com बाट साइटको डोमेन परिवर्तन गरें martech.zone। म dknewmedia.com ट्रैफिक बन्द ट्राफिक सम्म अर्को months महिना को लागी यूआरएल अग्रेषण गर्नेछ, तब म यसलाई पूर्ण रूपमा रिटायर गर्नेछु।
म तपाईंलाई जानकारी दिन्छु कि यो कत्तिको कठिन संक्रमण हो। आशा छ सबै ठीक छ!
नोट: यसले कुनै असर पार्दैन यदि तपाईं ईमेल मार्फत वा RSS मार्फत सदस्यता लिनुभयो भने।
टैग: डोमेनडोमेन परिवर्तन
चार ब्लगिंग गल्तीहरू मबाट अलग रहनु पर्छ
जुलाई,, २०१ at 7::2008। बिहान
डग! राम्रो ब्लग नाम र खुसीको साथ यो चाल राम्रो हुँदैछ!
पोखरीमा धेरै नै शुभकामना
जुलाई १,, २०१ at १::7२ अपराह्न
जबसम्म तपाइँ तपाइँको 301०१ लाई रिडिरेक्टहरू ठीकसँग गर्नुहुन्छ, मलाई लाग्दैन कि यो Google-ide को हिसाबमा समस्या हुनुपर्दछ। मैले डग्लसकेयर.कट.मा सेवानिवृत्त हुने कुनै कारण देखिन। यदि तपाईं सबैलाई यसको उपयुक्त यूआरएलमा red०१ पुन: निर्देशित गर्नुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं लिंक जुस बनाए जब सम्म डग्लसकेयर.कट.को आउने लिंकहरू अवस्थित हुनेछ (जुन सम्भवतः सदाका लागि हुनेछ)।
अहिले सम्म सहज देखिन्छ, म पक्का छु कि यसले सबै हा, डगका लागि काम गर्दछ।
साथै, म शर्त गर्छु कि डग कारर खुशी छ। 🙂
र यसैले मलाई फीडबर्नर मनपर्दछ। ग्राहकहरूको लागि निर्बाध संक्रमण।
मलाई लाग्छ यो स्मार्ट चाल डग हो। नयाँ डोमेन नाम तपाईको लक्षित कोठासँग अधिक मिल्दो जुल्दछ, र विलीले माथि भने जस्तो तपाईले आफ्नो 301०१ को पुनःनिर्देशन सेटअप राम्रोसँग पाउनु भएको छ, तपाईको खोज इञ्जिन स्तर निर्धारणले वास्तवमा कष्ट भोग्नु हुँदैन।
त्यस्तो नराम्रो नहुनुहोस्, डग।
तपाईंले ठीक गर्नुहुनेछ। 🙂
मेरो मतलब, म अझै पढ्छु।
जुलाई,, २०१ at 8::2008। बिहान
मैले जनवरीमा मेरो युआरएल सारें र फेला पारे कि तपाई जस्तो फिड पनि परिवर्तन गर्नु ठूलो सहयोग थियो।
यद्यपि मैले मेरो पुरानो साइट सेवानिवृत्ति नगर्ने निर्णय गरेको छु। मेरो पुरानो साइटसँग अन्य ब्लगहरू र वेबसाइटहरूबाट धेरै लिंकहरू थिए, म अझै पनि यसबाट आउने ट्राफिक प्राप्त गर्छु। मलाई ब्लगरोलमा राख्ने धेरै जसो मान्छेसँग पुरानो साइट हुन्छ। केहि व्यक्तिहरू अझै मनपर्दो प्रयोग गर्दछन्, RSS होइन। धेरै गुगल परिणामहरू अझै पनि पुरानो साइट हो।
जे भए पनि, संक्रमणको साथ तपाईंलाई शुभकामना।
अगस्ट 13, 2008 मा 12: 35 AM
म आशा गर्दछु कि तपाईले यस लाई केहि फॉलो-अप पोष्ट गर्नुहुन्छ।
जब मैले मेरो पहिलो डोमेन नाम किनेको, मूर्खले मलाई यसमा हाइफनको साथ एक छनौट गर्‍यो। यो कुनै ठूलो समस्या हैन, तर केहि जुन म अन्ततः परिवर्तन हुनेछ।
मलाई थाहा छ कि यसले मेरो एसईओ प्रयासहरू र ट्राफिकलाई कसरी असर गर्छ भनेर जान्न चाहान्छु।
अगस्ट 28, 2008 मा 3: 35 AM
तपाईं स्थानान्तरण कसरी गर्नुभयो बारेमा एक पोस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ भने राम्रो हुनेछ, उदाहरणका लागि तपाईं कसरी आफ्नो WordPress स्थापना, कसरी पुनर्निर्देशन कसरी गर्ने, कुनै पनि अन्य सुझावहरू जुन तपाईंले मार्गमा सिक्नु भएको थियो।